बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिँदै, कर्जा लगानी पनि बढ्दै Bizshala -
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिँदै, कर्जा लगानी पनि बढ्दै
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रम जारी रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पुस २५ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। योसँगै कुल निक्षेप ४८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत पुस २३ गतेसम्म कुल निक्षेप ४८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
पुस २५ गते वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप भने ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। योसँगै वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत पुस २३ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
पुस २५ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट थप ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यो दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल कर्जा लगानी ४६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत पुस २३ गतेसम्म कुल कर्जा लगानी ४६ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
वाणिज्य बैंकहरुले भने पुस २५ गते थप ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। गत पुस २३ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा पुस २५ गतेसम्म बढेर ४१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो पनि पुस २५ गते सामान्य बढेर ८९.३७ प्रतिशत पुगेको छ। पुस २३ गतेसम्म औसत सीडी रेसियो ८९.२९ प्रतिशत रहेको थियो।
अन्तर बैंक ब्याजदर पनि ३.२४ प्रतिशत बढेर ४.१६ प्रतिशत पुगेको छ।
nepal rastra bank deposit
रु. १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, भोलि
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा चिन्तामणि शिवाकोटी र...
सरकारले रु. ३ अर्ब बढीको ‘नागरिक बचतपत्र’ बिक्री गर्ने, ११%
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले यही जेठ १२...
रु. २७.२० अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, आज
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जेठ ९ गते (सोमबार) २७ अर्ब २० करोड...
व्यापार घाटामा सुधार नआएसम्म तरलताको अभाव रहिरहन्छ : गभर्नर
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले...
आरटीजीएस प्रणाली आउँदो आइतबार पनि सुचारु रहने
काठमाण्डौ । आरटीजीएस प्रणाली आउँदो आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन पनि...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र...
डलरको तुलनामा कमजोर बन्दै नेपाली रुपैयाँ, विनिमय दर हालसम्मकै
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको विनिमय दर बुधबार हालसम्मकै उच्च विन्दुमा...